आखिर चलचित्र प्रदर्शन पस्चात किन बदलिन स्यारोनले आफ्नो बोली? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentआखिर चलचित्र प्रदर्शन पस्चात किन बदलिन स्यारोनले आफ्नो बोली?
आखिर चलचित्र प्रदर्शन पस्चात किन बदलिन स्यारोनले आफ्नो बोली?
July 23, 2017 sutraentertainment Entertainment, Kollywood, News 0
दुर्गिस फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित अन्य चलचित्र जस्तो चलचित्र सायद २ ले खास्सै सफलता हासिल गर्न सकेन। चलचित्र भन्दा पनि पछील्लो समय नायीका र निर्माता बिचको जुहारी मिडियामा छ्यापछ्यापती देखिएको छ। निर्माता र नायीका बिचको भनाभन र आरोप प्रत्यारोपले यतिबेला नेपाली मिडियालाई राम्रै खुराक मिलिरहेको छ। चलचित्र फ्लप भएको हल्ला बजारमा आउन थाले पछी नायीका स्यारोन श्रेष्ठले केही पत्रकारहरु भेला गरेर आफु माथि अन्याय भएको र चलचित्रको वोर्कसप देखी नै ह्यारेस्मेन्ट भएको बताईन। उनको त्यो आरोपलाई निर्माता रावलले गलत हो भनेर खन्डन पनि गरे।
यो झगडाको सुरुवात भएको थीयो निर्माता सुनिल रावलको फेसबुक लाइभ बाट। उनले आफ्नो फेसबुक लाइभमा नायीका श्रेष्ठले चलचित्र प्रोमोसनमा सहयोग नगरेको भन्दै आफ्नो करोड बडीको लगानी मा खेलेको भनेका थीए। अनी सुरु भयो यो जुहारी। स्यारोनले उनको यो भनाईलाई लिएर पत्रकारहरु भेला गरिन अनी भनिन म माथि ह्यारेस्मेन्ट भएको थीयो। उनको यो अन्तर्वाता नेपाली मिडिया लगभग सबै जसोमा आए। स्यारोनको यो कदम देखेर सबैले उनलाई आट्टी नायीका भनेर मान्न पनि थाले। स्यारोन सुनिल कान्ड यती मै रोकिएन। दुर्गिस फिल्म्सको अगिल्लो फिल्म होस्टल मा अभिनय गरेकी प्रक्रिती श्रेष्ठले पनि आफु माथि पनि त्यस्तै भएको थीयो भनेर आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरिन। प्रक्रितीको यो स्टाटस सँगै यो मामला झनै तातिदै गएको छ।
कुरा दुबै तिरको आफ्नो ठाउँमा सहि होला र यसको निचोड पनि निस्केला र निस्किनु पनि पर्छ। एक तिर नव नायीका छिन् जो नेपाली चलचित्रमा आफ्नो भविस्य खोज्दै छिन् र अर्को तर्फ निर्माता जो नेपाली चलचित्र निरन्तर निर्माण गरिरहेका छन। तर पछील्लो समय एउटा भिडियो फेला परेको छ जुन भिडियोमा स्यारोनले आहिले भनेको र पहिले भनेको कुर ठ्याकै उल्टो छ। सायद २ प्रदर्शन पुर्व क्यानडा नेपाल अन्लाईन टि.भी सँगको कुराकानीमा स्यारोनले आफु माथि कुनै किसिमको सेक्सुअल ह्यारेस्मेन्ट नभएको प्रस्ट भनेकी छिन्। यदी प्रदर्शन पुर्व निर्माताले उनिमाथि कुनै किसिमको ह्यारेस्मेन्ट गरेका थीएनन भने अहिले स्यारोनले आफु माथि ह्यारेस्मेन्ट भयो भन्नु के सहि हो? यो भिडियो हेरेपछी हामी पनि सोच्न वाध्य भएका छौ “साच्चै ह्यारेस्मेन्ट भएरै हो या स्यारोन कतै बाट परिचालित भएकी छिन्, यो सोचनिय बिषय बनेको छ। यसले अर्को तरङ पक्कै पैदा गर्ने छ।
चलचित्र प्रदर्शन पहिले स्यारोनले क्यानडा नेपाल सँग गरेको कुराकानी र चलचित्र प्रदर्शन पस्चात पत्रकार सँग गरेको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्…
छक्का पन्जा-२ लाई गीत चोरिको आरोप, मुद्दा हाल्ने तयारीमा सर्जकका परिवार